आज लक्ष्मीपूजाको दिन गर्न नहुने १८ काम !
Homeराष्ट्रिय खबरआज लक्ष्मीपूजाको दिन गर्न नहुने १८ काम !
October 27, 2019 kandai kanda2राष्ट्रिय खबर
काठमाडौं /यसपटक कार्तिक १० गते राति लक्ष्मीपूजा परेको छ । लक्ष्मी पूजाका दिन महालक्ष्मीको विधिपूर्वक पूजा गरिन्छ । लक्ष्मीपूजाका दिन देवी लक्ष्मीको आराधनासहित स्वागद गर्दै दियो बाल्ने गरिन्छ ।
तिहारमा ढुक्कले झिलिमिली बाल्नु , प्राविधिक समस्या आए हामी छौं : कुलमान
कास्की २ मा महिला नेत्री केसी र भट्टराई आमनेसामने, कस्ले मार्ला बाजी ?